OpenSuse Factory: Inona no hatao aorian'ny fametrahana azy? | Avy amin'ny Linux
petercheco | | Fitsinjarana, GNU / Linux
Araka ny fantatry ny maro fa ampiasaiko openSUSE, ary nampihariko tamin'ny PC sy ny server rehetra nataoko ... Ao amin'ireo mpizara no itehirizako ireo kinova fanampiana tohiny (Evergreen), androany dia kinova 13.1.
Raha ny momba ny PC, dia vao haingana aho no nampiasa ny kinova 13.1, saingy afaka 19 andro miala ny fandefasana ny kinova 13.2 izahay ary nametraka fanontaniana tamin'ny tenako ... Hivadika ho an'ny kinova 13.2 ve aho sa hiova amin'ny kinova OpenSUSE Factory satria Rolling Release izy io ary tsy mila apetraka intsony?
1 Inona ny orinasa OpenSUSE?
2 Avy aiza aho no misintona azy?
Inona ny orinasa OpenSUSE?
Ny fizarana OpenSUSE Factory dia fizarana mihodina ary fototry ny famoahana ny openUSE manaraka.
Misy kitapo tsy tapaka tsy tapaka miditra amin'ny OpenSUSE Factory. Tsy misy hatsiaka ary ny rafitra fonosana dia voasedra amin'ny alàlan'ny openQA. Rehefa vita ny fitsapana mandeha ho azy ary ny trano fitehirizana dia ao anaty toerana marin-toerana, ny repository dia dinihin'ny ekipa openSUSE ary ampiarahina amin'ny fitaratra ho alaina. Mitranga izany indray mandeha na indroa isan-kerinandro.
Rehefa avy nandinika sy nikaroka fatratra aho dia nanapa-kevitra ny hitsambikina amin'ny kinova Factory, eny, manao fametrahana madio ...
Ireto misy sary vitsivitsy an'ny Factory misy ahy miaraka amin'ny shell Gnome:
Manoro hevitra anao aho ny misintona ny DVD an'ny kinova Factory:
Vantany vao tafapetraka ny rafitra dia manohy manokatra ny terminal izahay ary manoratra:
su (ampahafantarinay ny teny miafina momba ny superuser) zypper fanavaozana zypper install-new-manoro hevitra
Repository Packman (atoro anao):
zypper ar -f -n packman-ilaina http://packman.inode.at/suse/Factory/Essentials/ packman-essentielle
Gnome repository (raha mampiasa Gnome… Recommended):
Repository KDE (raha sanatria mampiasa KDE… tsy voatery):
fanavaozana ny zypper fametrahana zypper-vaovao-soso-kevitra ny fanavaozana ny zypper dist
Manohy amin'ny fametrahana programa fototra izahay:
zypper mametraka vlc vlc-codecs fetchmsttfonts rar unrar htop nano mc filezilla MozillaThunderbird
fanavaozana zypper zypper fametrahana-vaovao-fahazoan-dàlana
Manohy amin'ny fametrahana ireo fonosana farany ambany izahay hanangonana (tsy voatery):
apetraho zypper --type pattern devel_basis
Ary voila… Efa vonona ny OpenSUSE Factory anao ary mizaha ny ranomasina Roling Release.
PS Ny lohahevitra ampiasaiko ho an'ny akorandriaka dia Numix Frost ary ny sary masina dia Numix Circle.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » OpenSuse Factory: Inona no hatao aorian'ny fametrahana azy?
Mieritreritra aho fa hapetrako eo am-pofoako io.
Misaotra ny mpitari-dalana
Heveriko fa tsy azo atao ny misokatra amin'ny Internet, acpi ary ny totozy tsy hita. Mbola tsara ho an'ny fotoana niainako
Ny fanapahan-kevitra tsara indrindra dia voafidy hisafidy ny Factory, nefa tsy jerena fa ny kinova OpenSUSE dia avo lenta toy ny 13.1
Salama, ary maninona no be fitiavana amin'ny OpenSuse? inona ny tombony hitanao? Etsy andanin'izay, kinovan'ny Gnome no azo apetraka.
Ny fitiavana dia noho ny zava-misy ao ambadik'io fizarana io dia vondrom-piarahamonina iray izay miraharaha isan'andro ny famoahana vokatra avo lenta toy ny OpenSUSE, mametraka azy amin'ny toerana voalohany. Ohatrinona ny Gnome azonao atao ny mahita ny kinova farany amin'ny andiany manaraka 13.2 sy amin'ny Factory.
Salama, jereo ny tombony azo amin'ny openSUSE misy maro ... Anisan'ireo lehibe indrindra ny fitoniana, ny tahiry, ny fanavaozana ny lozisialy na ny yast ankoatry ny hafa ...
Fampahalalana bebe kokoa:
Tsy nanandrana ny OpenSuse efa ela aho… Te-hametraka azy aho, misaotra anao naka fanahy ahy hampiasa OpenSuse Factory:]
Eny, hitako fa tena tianao ity kinova ity, tianao koa i yoyo. Mampalahelo fa raha ny amiko dia tsy mamela ahy hametraka azy tsara, noho ny karatra horonantsary Ati. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy misy mpamily miorim-paka an'ny tompony, ary ny fampiasana ireo maimaim-poana dia tsy mamela ahy na tsy nanampy azy ireo tsara aho satria tsy mandalo ilay gdm.
Migu3 dia hoy izy:
dia iza amin'ireo no roa.
 openSUSE-Factory-DVD-x86_64-Current.iso 12-Oktobra 2014 18:24 4.3G
 openSUSE-Factory-DVD-x86_64-Snapshot20141011-Media.iso 12-Ok-2014 18:24 4.3G
Valiny amin'i Migu3
Sintiko ny ankehitriny.iso.
Nahaliana, nanontany tena aho hoe rahoviana izy ireo no hanokana lahatsoratra ho an'ilay katy kely. Nanandrana azy nandritra ny herinandro aho ary tena tsara. Raha lazainao amiko ny fomba fametrahana multifunction HP, avelako eo amin'ny laptop-ko 😉
Raha ny tokony ho izy dia tokony hiresaka kely momba ny fampisehoana izay farafaharatsiny ho ahy ianao, tena tsara.
Misaotra ny lahatsoratra, tena tiako izany.
Raha ampiana ny mpanonta anao dia afaka mandeha any amin'ny Yast -> Printer ary ampio izy na apetraho ilay mpamily hp antsoina hoe hplib miaraka amin'ilay baiko:
zypper mametraka hplib
abrahamtamayo dia hoy izy:
Tsy mbola nampiasa Suse mihitsy aho, angamba indraindray misintona azy aho fa nametraka an'i Mandrake izay tsy tiako .. nametraka ilay CD mivantana voalohany aho .. Knoppix .. ny dingana farany namelako ny linux tamin'ny solosaina dia ny Ubuntu .. Avy tao no nahitan'izy ireo distros toa Sabayon izay nampiasako nandritra ny taona maro dia niverina tany Ubuntu aho fa tsy hitako intsony ilay izy .. ary rehefa tonga ny unit dia nahatonga ahy mandrakizay hanapa-kevitra amin'ny distro hafa ary hitako ny ArchLinux izay nitsiriritra ny pikantsarin'izy ireo .. ahoana no fomba nametrahako azy tamin'ny solosaina hafa dia nankany Manjaro aho .. satria efa namboarina .. saingy nahasarika ahy izany na dia fantatro aza fa io no an'i Ubuntu an'i Debian .. Manjaro mankany ArchLinux .. Ny torolàlana rehetra dia ny milaza fa ny fanavaozana mitohy dia ny ambony indrindra ary tokony ho ny hoavin'ny Linux ... fa ny OpenSuse sy ny Red Hat no orinasa mitarika ao amin'ny Linux ary mandray izany dingana izany ny OpenSuse dia manosika ahy hanandrana azy ary tiako ilay lahatsoratra mba hanamorana izany dingana izany ..
Mamaly an'i abrahamtamayo
Izao, raha andramana dia voalaza fa: D.
Misaotra anao Peercheco tamin'ny fitarihana anao manokana ary satria izy io dia fanovozan-kevitra.
Mampiasa ny SUSE amin'ny endriny farany aho fa ao amin'ny Kde ary marina ny voalazanao raha distro marin-toerana izy io. Ary manana ekipa matihanina amin'ny taha voalohany ihany koa izy io, izay adika ho fizarana isa voalohany. Hoy ianao hoe: »Miova amin'ny kinova 13.2 ve aho sa miova amin'ny kinova OpenSUSE Factory satria Rolling Release izy io ary tsy mila mametraka indray?. Eny, raha fintinina dia heveriko fa tsy maninona izany satria raha tsy mametraka ianao dia tsy maintsy mametraka avy eo. Ho ahy kosa, mieritreritra aho fa hametraka any aoriana raha sendra misy bibikely sy fotoana hanarenana azy, na dia tsy dia mety loatra aza izany.
Mampalahelo ny mahafoy ny fizarana 13.1, izay nanome valiny tena tsara ary mbola manome, ary raha fintinina, isaky ny misy fiovana fizarana dia mitovy amiko no mitranga amiko ary mampalahelo ny miala amin'ny zavatra mandeha tsara satria tsy fantatsika hoe hanao ahoana izany. ho avy.
Raha mitady fitoniana faran'izay betsaka ianao ary malahelo ny manova ny 13.1 ka hatramin'ny 13.2 na ny Factory dia manohy mampiasa 13.1 satria izy io dia kinova miaraka amin'ny fanohanana Evergreen lava ... Info bebe kokoa:
Hatramin'ny volana novambra 2016 farafaharatsiny, misy fotoana :). Toy izany koa no ataoko amin'ny mpizara.
Rehefa avy nametraka Gentoo, Ubuntu, Debian ary Arch aho, ny kasaiko hijanonana miaraka amiko dia OpenSUSE, ny marina dia mampiasa 13.1 aho ary manana fitoniana azo oharina amin'ny tranon'omby Debian fa misy fonosana bebe kokoa ankehitriny. Manoro hevitra azy aho na amin'ny fampiasana isan'andro, indrindra amin'ny solosaina finday, sy amin'ny tontolon'ny famokarana, ity distro ity dia manome fahatsapana fitoniana sy fahamatorana izay mbola tsy hitako tamin'ny hafa.
Eny tokoa, io no iray amin'ireo tsara indrindra any ary mieritreritra aho fa mbola milamina kokoa noho ny an'i Debian Stable mihitsy izy io. Miseho ny fakan'ny Slackware.
Mampiasa Debian Testing KDE aho ary milamina tsara izy io, tsy nisy tsy nahomby ahy ary mandeha haingana be izy io. Suse dia manelingelina be an'ireo repositories, mila manampy betsaka amin'izany ianao, mampiasa openuse amin'ny netbook-ko aho ary distro tsara ihany koa. Saingy tanky i Debian ary tsy misy mitovy amin'ny voditongony
Miaraka amin'ny tsy fitovizan'ny Slack tapaka amin'ny fanavaozana rehetra, ny OpenSUSE dia miorina tsara.
Izaho dia nampiasa Factory saika hatramin'ny fotoana nahatongavany ho RR, ary ny zavatra niainako dia tsy tokony ho tsara kokoa. Napetrako eo amin'ny birao (Asus board, fa tsy UEFI satria taona vitsivitsy), miaraka amin'i Fedora sy Win7, ary tonga lafatra ny zava-drehetra.
Nametraka azy io ihany koa aho andro vitsivitsy lasa izay tao amin'ny Netbook kely ananako (Acer TravelMate B113-E), izay manana bios EFI, ary ampiarahiko miaraka amin'i Fedora 21 (alpha, fa io koa manintona). Olana kely, ary haingana toa azy irery.
Amin'ity farany ity, mba hisorohana ny olan'ny UEFI rehetra dia nametraka openSUSE aho ary avy eo nametraka ny Fedora (nozaraiko ny GPT ho an'ny modernisation kely), avy eo, tamin'ny alàlan'ny UEFI, teo alohan'ny boot, dia nanindry ny F12 aho, mba hivoahana ny menu boot bios (raha tsy nanao an'izany aho, dia i Fedora ihany no niseho tao Grub), nisafidy ny hanao boot miaraka amin'ny openSUSE aho ary, rehefa niditra tao anaty, niaraka tamin'i Yast aho dia nankany amin'ny faritra boot boot, nanamafy aho fa mbola nanana azy io tany Grub2-EFI ary nanana aho ahafahana mandinika ireo rafitra miasa hafa…. ary rehefa nikatona aho ... voila !!, nametraka ny openSUSE Grub2 indray aho, fa izao dia mampiditra ny safidin'i Fedora, mba hahafahako manomboka ny rafitra tadiaviko nefa tsy mila mampiasa "fanalahidy hafahafa".
Tsy haiko na soso-kevitra izany na raha tena izy, fa ny fitambaran'ny 'btrfs' ho an'ny root, ary ny XFS ho an'ny '/ home' dia mahatonga azy io handeha haingana be.
Araka ny nolazaiko, ny OpenSUSE Factory no rafitra malalako amin'izao fotoana izao ...
… Ary manampy PackMan ho an'ny orinasa (misaotra YoYo tamin'ny lahatsoratra nahitako azy)… Tsy nisy zavatra tsy hitako…
Ny mpanonta Wi-Fi izay ananako dia manome ahy aretin'andoha kely, fa ny tifitra dia mamaky ny firewall (ao amin'ny Fedora no ahitako azy ary alamino haingana, amin'ny openSUSE mandany fotoana lava aho amin'ny alàlan'ny firewall ...)
Avy amin'ny zavatra niainako fohy dia heveriko fa miorina tsara ny Factory mba hisafidianana azy fa tsy 13.2
openSUSE no distro-ko nandritra ny fotoana ela, mandra-pametrahako azy amin'ny solosainako ary hijanona tsy hiasa ny KDE raha ovaiko ny endrika na ny endritsoratra (Aller).
openSUSE amin'ny birao sy ny Arch amin'ny solosaina finday, izay tsara hatreto (halany Linux matetika, fa hatramin'izao dia tsy mila Windows akory izy ...)
Virgil Kaisara dia hoy izy:
Heveriko fa afaka manampy ny libdvdcss Repo koa ianao.
Nanao ny fametrahana aho taloha kelin'izay fa tena maintso ilay tetikasa ary tsy nandeha tsara, iray amin'ireo teboka mora tohina ao anatin'io fametrahana io dia ny hoe tsy mandeha ny YaST, miasa ve ny YaST nefa tsy misy olana?
Valiny tamin'i Virgil Caesar
Salama, miasa tsy misy olana i Yast ary amin'ny ankapobeny dia milamina ny zava-drehetra… Raha ny momba ny libdvdcss repo, tsy haiko raha misy ho an'ny Factory izy io satria tsy ampiasaiko izany… Ataoko amin'ny VLC daholo ny zava-drehetra.
Yusef dia hoy izy:
Naka fanahy ahy ity lahatsoratra ity ianao teo am-pamakiana azy io tany am-piasana. Be loatra ka amin'izao fotoana izao dia manoratra aminao avy amin'ny Notebook aho miaraka amin'ny openSUSE izay napetraka fotsiny. Tena tiako ny fikarohany amin'ny estetika. Mbola mianatra avy aminy aho hatramin'ny niavian'ny Linux Mint. Saingy amin'ny farany, tsy misy zavatra tsy vita eto amin'ity tontolo ity toa ny Linux.
Misaotra anao namporisika an'ity fanandramana ity hampiasa ny "tsy fantatra" (farafaharatsiny ho ahy).
Mamaly an'i Yusef
Tongasoa ianao namana ary manantena aho fa mankafy ny SUSE anao: D betsaka.
Manambara ny tenako ho mpankafy ny Arch sy ny derivatives-ny aho, saingy nijery ny openSUSE avy any andaniny foana aho tamin'ny fialonana. Te hanandrana aho fa mahazo aina be ao Antergos aho ka tsy fantatro xDD.
Handefa ny kinova Factory aho, tiako fa ny distro ampiasako dia havaozina isan'andro 🙂
Daty Rupit dia hoy izy:
Fa Peter, tsy nampiasa Slackware ianao tato ho ato?
Izay no antony nitahirizako ny Slackware tamin'ny milina sy mpizara rehetra ahy ary mikasa ny hijanona eto aho. Nandritra ireo volana ireo dia nandramako mafy ity distro ity hahafantarana raha marina ity dingana ity. Ary ny valiny dia eny .. Reny eny. Nandresy ahy ity distro ity, nahasarika ahy tanteraka ary tsy isalasalana fa io no zavatra tsara indrindra notsapako. Tsy manana teny hafa aho.
Valin'ny daty Rupit
Ie ekeko izany ... Tsy milaza aho fa ratsy ny Slackware. Ny manelingelina ahy dia ny fotoana tsy maintsy atokisanao hitahirizana azy ary marina fa tsy ananako ... SUSE dia teraka avy amin'ny Slackware ka mijanona ao amin'ny sampana aho fa misy zavatra mahazo aina kokoa: D.
teo dia hoy izy:
Manana fanontaniana aho hijerena raha misy afaka manampy ahy. Nametraka ny kinova famokarana tokony ho 2 herinandro teo ho eo aho tamin'ny iso ary nanao install madio aho. Ny olako dia tsy mandeha ny plymouth ary tsy miseho.
Systemctl status plymouth-start.service output output
Nampidirina: nisaron-tava (/ dev / null)
Mavitrika: tsy nahomby (Valiny: famantarana) hatramin'ny Sun 2014-10-19 20:52:03 CEST; 1min 31s lasa izay
PID lehibe: 292 (kaody = novonoina, famantarana = SEGV)
Fampitandremana: Niova tamin'ny rakitra ny rakitra unit, natoro ny 'systemctl daemon-reload'.
Tsy aseho amin'ny fanombohana na fanidiana. Misaotra anao.
Mamaly an'i teo
Azonao atao ve ny milaza amiko ny fomba hidirana amin'ny Ask na forum desdelinux, nefa tsy mila mamorona kaonty mailaka intsony? Tsy manaiky ny teny miafiko na ny anarako ary efa nisoratra anarana hatramin'ny aprily 2012 aho.
Sokafy toy ny faka ny terminal ary mihazakazaha:
systemctl mamela plymouth-start.service
systemctl manomboka plymouth-start.service
Amin'izay dia tokony handeha :).
zarvage dia hoy izy:
ao amin'ilay baiko "plymouth-set-default-theme openSUSE –rebuild-initrd"
izay miteny hoe –rehaveta-initrd dia script roa toa izao
Valio i zarvaje
tratran'ny mpanara dia hoy izy:
Raha vantany vao tafapetraka amin'ny zypper ny zava-drehetra, dia vita amin'ny alàlan'ny lasa ny fitantanana ny rafitra, sa tsy izany?
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia efa "factory" ny repositories, vaovao aho amin'ity distro ity ary tsy fantatro hoe manao ahoana ny RR.
Mamaly an'i Trasto
Eny tokoa ... Rehefa tafapetraka ianao dia afaka manao ny zava-drehetra avy amin'ny Yast anao. Aza manahy momba ny fanarahana ny mpampianatra ahy fa ho omaninao izany.
Perfect dia efa napetraka, misy hadisoana hafa noho ny iray hafa fa eo am-pandrosoana, misaotra ny mpitaiza petercheco 😉
Tsy manana olana aho .. Indraindray mandeha ao amin'ny terminal:
Lazaiko anao satria mihodinkodina izy io ary tsy maintsy manavao hatrany ianao ... Raha tsy te-hanavao be dia be dia ampiasao ny famotsorana. Androany dia azonao atao ny misintona ny kinova 13.1 izay LTS misaotra an'i Evergreen na miandry 14 andro amin'ilay kinova vaovao 13.2: D. Ny fanomanana ny distro dia hitovy, fa esory ny repo GNOME, KDE ary Pacman amin'ity lahatsoratra ity ary ampiasao ireo izay mifanaraka amin'ny kinova ... Ho hitanao eto izany:
Nanandrana aho ary elaela vao nanangana azy (mbola tsy namaky ity torolalana ity aho). Na izany aza dia lasa mafana be ny laptop-ko, misy programa ao amin'ny Opensuse ve manampy ahy hifehy ny ° °?
Apetraho ny fonosana maodely-mode-fitaovana ary voavaha ny olana :).
navaozina ho Factory aho. Ankehitriny dia manandrana manomboka Apper aho, mahita ireo trano fitahirizana, na manavao, na zavatra hafa avy any yast ary tsy manokatra an'izay. nisy olon-kafa nitranga ve izany?
Napetrakao ve ny repo KDE ho an'ny Factory? Namerina namerina ilay rafitra ve ianao? Lazaiko aminao satria mandeha tsy misy olana ...
Izy io dia miasa tanteraka amiko manaraka ity torolàlana OpenSUSE 13.2 ity miaraka amin'ny kde. Fihemorana kely fotsiny miaraka amin'ireo mpamily Nvidia, izay mbola tsy namboarina tamin'ny kernel desktop 3.16.6-2-birao vaovao, satria somary mahantra ireo nouveau.
Faly aho fa miasa ho anao izy io, fa ho an'ny openSUSE 13.2 Manoro hevitra anao aho hampiasa ny torolalana natokana ho an'ity fizarana ity rehefa miova ny repositories packman ... Afaka mahita ny mpitari-dalana ao amin'ny lahatsoratro Taringa ianao.
Hapetrako eto koa ...
Misaotra pertercheco. Marihiko tsara ny rohinao.
Francisco Suarez dia hoy izy:
Tsy isalasalana fa ato amin'ny ArchLinux aho, ary nalaina fanahy ahy ity kinovan'ny OpenSUSE ity, saingy tsy haiko raha hisy mpamily ATI tompony (AKA Catalyst) ho an'ity sampana ity, satria mampiasa ireo maimaim-poana aho, mirongatra ny fanjifana herinaratra ary koa ny mari-pana ao amin'ny Laptop miaraka amin'ny APU A6 Version 3xxx, mila Lampp ho an'ny fampandrosoana sy Android-sdk koa aho, mety ve izany rehetra izany?
Miala tsiny amin'ireo fanontaniana, fa tsy manam-potoana ampy hanaovana fitsapana amin'ny sidina aho. Mihobia!
Valiny tamin'i Francisco Suarez
Ampidiro ny openuse 13.2 fa manana olana aho amin'ny fanavaozana, tsy ekeny ny repo oss tsy oss manome ahy hadisoana tsy afaka mifandray amin'ny mpizara. Ny zavatra hafahafa dia ny ahafahako mivezivezy tsy misy olana, nijery tao amin'ny google aho ary tsy nisy namaha izany, na dia tsy nanadio cache akory aza.
Ireo no pitsopitsony kely momba ny openuse.
Amboary /etc/sysctl.conf ary ampio na ovao ny sanda mba ho toy izao ny ampahany miresaka amin'ny ipv6:
Avy eo avereno indray ary alefaso ity baiko ity:
Mitady rindranasa hamoronana tantara an-tsary ao amin'ny GNU / Linux
Aptoide: fivarotana pirate? ... Repositories tsaratsara kokoa?